दोस्रो हाफमा पंकज- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
निम्न मध्यमवर्गका धेरै पिताजस्तै पंकज त्रिपाठीका किसान पिता पनि चाहन्थे, छोरो डाक्टर बनोस् । धेरै पैसा कमाओस् । सुखी र सम्पन्न जीवन बिताओस् । आफ्नो जस्तो दुखी किसानको जीवन छोराले भोग्नु नपरोस् । सबैका बाबु आमाको इच्छा पूरा हुने भए संसारमा कुनचाहिँ छोराछोरीले पो दुःख भोग्नुपर्ने थियो र ! पंकजको जीवनमा आफ्नो पिताले भन्दा बढी दुःख पाउनु लेखिएको थियो । त्यसैले उनको मनमा डाक्टरी चढेन ।
पटनामा कलेज त सुरु भयो होटल म्यानेजमेन्टको । साथै सुरु भयो छात्र राजनीति । पुरेतका छोरा पंकज लागे, बीजेपीको संगठनमा । नब्बेको दशकको छात्र राजनीति चर्को थियो । पंकज पनि चर्कै निस्किए । हडतालको नेतृत्व गर्न थाले । र, थुनामा पुगे । बिस्तारै राजनीति बेस्वादको लाग्न थाल्यो । मनमा शान्ति हुन छोड्यो । ‘यस्तै मन भड्किइरहेका बेला एक दिन म नाटक हेर्न पुगें,’ पंकज भन्छन्, ‘त्यस दिन बल्ल महसुस भयो मलाई सबभन्दा आनन्द त नाटकमा पो हुने रहेछ ।’ त्यसपछि उनी नियमित नाटकका दर्शक हुनथाले । पटनामा ६ वर्ष पंकजको नाटकगिरी चल्यो । ‘एक दिन एउटा अखबारमा मैले अभिनय गरेको नाटकबारे लेखिएको थियो । त्यसमा मैले चोरको भूमिका गरेको थिएँ । मेरोबारे एक लाइन थियो— यो कलाकारमा केही सम्भावना छ । पत्रिकाले समेत लेखेपछि त म पछि हट्ने कुरै थिएन,’ उनले भनेका छन् ।
पटनाको गाउँमा छँदा चाडपर्वमा केटी बनेर नाच्ने पंकज बिस्तारै नाटकको दुनियाँतिर लम्किन थाले । केही नाटकमा अभिनय गरेपछि पटनामा मन अडेन । अनि लागे, २००१ मा दिल्ली– नेसनल स्कुल अफ ड्रामामा अभिनय पढ्न । २००४ मा यहाँबाट ग्र्याजुएट गरेपछि नाटक गर्न पटना फर्किए । केही समयमा थाहा भयो, यहाँ नाटक गरेर बाँच्न सकिन्न । यसका लागि एउटै ठाउँ थियो— बलिउड, मुम्बई ।
‘म अक्टुबर १६ मा दिल्लीबाट ४६ हजार रुपैयाँ बोकेर मुम्बई गएको थिएँ, त्यसै वर्ष डिसेम्बर २५ मा मेरो गोजीमा जम्मा १० रुपैयाँ बाँकी थियो,’ उनले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन् । त्यसै वर्ष उनी अभिषेक बच्चनको फिल्म ‘रन’ मा सानो भूमिकामा देखिए । यसको १५ वर्षमा त्रिपाठी अहिले नयाँ बलिउडमा ‘डिजिटल किङ’ बन्दै छन् ।
होटल म्यानेजमेन्टको पढाइ सकेपछि काम सुरु भयो, पटनाको होटल मौर्यमा । किचनको जिम्मा थियो । नाटक र फिल्मको चस्का चढिसकेको थियो । बिहारकै एक गाउँबाट मुम्बई पुगेर स्टार बनेका मनोज बाजपेयी थिए प्रेरणाका स्रोत । ससाना भूमिकामा अभिनय गर्दै १९९८ को ‘सत्या’ बाट रातारात स्टार बनेका बाजपेयी पटना आइजाइ गरिरहन्थे । एक दिन कसैले सुनायो— तेरो मनोज बाजपेयी यही होटलमा आएर बसेको छ त !
‘उनले कुनै पनि कुरा मगाए भने प्लिज मलाई पठाइदेऊ,’ उनले किचन विभागमा अर्जी हाले । तर, मौका मिलेन । दुई दिन बसेर बाजपेयी हिँडे । स्टोरको एउटा केटाले भन्यो, ‘तेरो बाजपेयीले चप्पल छोडर गएछ ।’ उनले बिन्ती बिसाए, ‘स्टोरमा राखेर यो चप्पल तिमीहरूले के गर्छौं ? मलाई देऊ । म त्यसलाई रामको खराउ जसरी राख्नेछु ।’ पंकजमा भरतको रूप प्रकट भयो । स्टोरको केटाले उनको भक्ति देखेर चप्पल दियो । ‘मलाई त्यस दिन ठूलो खजाना प्राप्त गरेजस्तो लाग्यो,’ पंकज भन्छन् ।
हालै ‘कपिल शर्मा सो’ मा हिन्दीका प्रसिद्ध कवि डा. कुमार विश्वासको कवितासंग्रह विमोचन गर्न मनोज वाजपेयीसँगै पंकज पनि आए । यो सोमा फेरि एकपटक मनोज बाजपेयीको चप्पलको किस्सा चल्यो । मनोजले भने, ‘ग्यांग्स अफ वासेपुरको सुटिङका बेला एक दिन पंकज मेरो छेउमा आयो र भन्यो— पटना मौर्यमा तपाईंको चप्पल हराएको याद छ ? मैले बिर्सिइसकेको थिएँ । उसैले भन्यो त्यो चप्पल मैले राखेको थिएँ ।’ सोमा यो कुरा चल्दा पंकज निकै भावुकसमेत भए । अनुराग कश्यपको ‘ग्यांग्स अफ वासेपुर’ (२०१२) मा सुल्तान नामक कसाहीको चरित्रमा देखिएपछि पंकज दर्शकको नजरमा परे । यसका लागि उनको अडिसन मात्रै ८ घण्टा चलेको थियो । नील बट्टे सन्नाटा, मसान, फुर्के, अनारकली अफ आरा, गुणगाव, बरेलीकी बर्फी, न्युटन, स्त्री र सुपर ३० जस्ता फिल्मले पंकजलाई बलिउडमा स्थापित गराए । ‘न्युटन’ का लागि त उनले राष्ट्रिय पुरस्कारसमेत पाए । ‘सिक्रेड गेम्स’ र ‘मिर्जापुर’ जस्ता वेब सिरिजले उनलाई डिजिटल दुनियाँको पनि स्टार बनाइदिएका छन् ।
‘कुनै बेला थियो म आफ्नो फोन घरमा फोनको सबभन्दा राम्रो नेटवर्क लाग्ने ठाउँमा राख्थें । मलाई लाग्थ्यो कुनै कास्टिङ निर्देशक वा सहायक निर्देशकहरूको फोन आइहाल्ला र मेरो फोन नलाग्ला । कैयौं दिनसम्म फोन त्यहीं हुन्थ्यो तर एकपटक पनि बज्थेन,’ उनले टाइम्स अफ इन्डियासँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘अहिले मेरो फोन यति बज्छ कि म उठाउन सक्दिनँ ।’ साथीहरूले बलिउडमा काम गर्न बम्बई बोलाउँदा पंकजले एउटा रणनीति बनाएका थिए— बाँच्नका लागि ससानाजस्ता भूमिका आउँछन्, सबैमा अभिनय गर्ने । ‘म अभिनय गर्न सक्थें, पढेको पनि थिएँ । मैले अभिनयलाई नै करिअर बनाउने निर्णय गरेपछि यसले मलाई बचाउनु पनि त पर्‍यो । मेरा लागि बाँच्नु पहिलो कुरा हो, अभिनय दोस्रो । तपाईं जीवित रहे न कला देखाउन सक्नुहुन्छ । तपाईं नै रहनुभएन भने केको कला ?’ उनले भन्ने गरेका छन् । यही नीतिअन्तर्गत उनले ‘रन’, ‘अपहरण’ र ‘ओमकारा’ जस्ता फिल्ममा एक दुई दृश्यमा अभिनय गरे । यी सबै चर्चित र सफल फिल्म थिए । तर, यिनको क्रेडिट टाइटलमा उनको नामसमेत थिएन । तर, त्यही सानो भूमिकाबाट आएको पैसाले उनी भाडा तिर्थे । ‘मुम्बई आएको पहिलो वर्ष मेरो गोजीमा श्रीमतीको जन्मदिनमा केक वा गिफ्ट किन्ने पैसा थिएन । त्यसै दिन मैले प्रण गरेको थिएँ, पहिला बाँच्न सक्ने बन्छु, त्यसपछि बल्ल कला देखाउनतिर लाग्छु ।’ यस्ता ससाना भूमिकाले बचाउँदै आएको पंकजले आठ वर्षपछि बल्ल ‘ग्यांग्स अफ वासेपुर’ पाएका थिए । यो फिल्मले भने उनलाई स्टार बनाउने बाटोमा पुर्‍याइदियो ।
स्टार बने पनि पंकज आफ्नो पुरानै शैलीमा कायम छन् । उनको कुनै प्रचार संयन्त्र छैन । उनी सबै स्क्रिप्ट आफैं पढ्छन् । निर्देशक र कास्टिङ निर्देशकसँग आफैं मिटिङ गर्छन् । दुई वर्षअघि समाचार संस्था रोयटर्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘बलिउड खासमा कुवाका भ्यागुताहरूले भरिएको छ । यिनका लागि संसार यही मुम्बई सहर र यहींको मिडिया हो । पेज थ्रीमा जसको फोटो धेरै छापियो त्यही सफल हो भन्ने यिनलाई लाग्छ । मिडिया र प्रचार हेर्नका लागि सबैले मान्छे राखेका हुन्छन्, तिनले जे सुनाउँछन् स्टारले त्यही पत्याउँछन् । म यस्ता कुरामा विश्वास गर्दिनँ । संसार धेरै ठूलो छ । मेरा प्रशंसक मुम्बईमा मात्र छैनन् । राजस्थानमा छन् । भारतबाहिर नेपालमा पनि मेरा निकै प्रशंसक छन् । म ती दर्शकलाई ध्यानमा राख्छु, जो मेरो पहुँचभन्दा पर छन् तर मेरो फिल्मको नजिक छन् ।’
५५ वर्षको हाराहारी उमेरमा रहेका तीन खान, अजय देवगन र अक्षयकुमारको दबदबा रहेको बलिउडमा ४२ वर्षीय पंकज हिरो हिरोइनका बाबुको भूमिका गरिरहेका छन् । तर, उनलाई यसमा आपत्ति छैन । ‘म कुन चरित्रमा छु भन्ने महत्त्वपूर्ण होइन, अभिनेताका रूपमा मैले त्यसलाई कत्तिको विश्वसनीय र रोचक बनाउन सकें भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । म राम्रो अभिनेता हो कि होइन भन्ने कुरा मैले पाउने भूमिकाले होइन मैले त्यसलाई न्याय गर्न सक्ने क्षमताले निर्धारण गर्छ,’ उनी भन्छन् ।
मनोज बाजपेयी र इरफान खानको सफलतापछि बलिउड अहिले राम्रो अभिनय गर्ने औसत ‘लुक्स’ का अभिनेताहरूप्रति पनि आकर्षित छ । यसैको फलस्वरूप नवाजुद्धिन सिद्दिकी, केके मेनन, सञ्जय मिश्रा र पंकज त्रिपाठीजस्ता अभिनेताहरू बलिउडमा स्टार भइरहेका छन् । हुन त असी र नब्बेको दशकमा पनि नसिरुद्धिन शाह, ओम पुरी, पंकज कपुरजस्ता अभिनेताहरू थिए । तर, उनीहरू मुख्यतः समानान्तर सिनेमामा मात्र देखिन्थे । अहिले भने त्यो अवस्था छैन । धर्मा प्रोडक्सनको ‘ड्राइभ’, कंगना रनावतको ‘पंगा’, इरफान खानसँग ‘अंग्रेजी मिडियम’ र कपिल देवको बायोग्राफी ‘८३’ लगायतमा पंकज देखिदैछन् ।
पंकज त्रिपाठी अभिनयलाई सिक्नुपर्ने कुरा मान्छन् । ‘तपाईंमा केही खुबी छ भने पनि त्यसलाई परिस्कार गर्दा झन् राम्रो नि । कोही प्यासनले मात्र डाक्टर वा इन्जिनियर बन्न सक्दैन । भावना वा आवेग/संवेगको सिर्जना जीवनमा हुन्छ । अभिनेताले त्यसको पुनःसिर्जन गर्ने हो । यसका लागि थोरै प्रशिक्षण आवश्यक हुन्छ,’ उनले द हिन्दुसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।
पंकजका केही ‘स्वप्न भूमिका’ छन्, जसमा उनी अभिनय गर्न चाहन्छन् । साहित्यानुरागी पंकजको रोजाइका ती भूमिका हुन् फणिश्वरनाथ रेणुको कथा ‘मारे गए गुलफाम’ र श्रीलाल शुक्लको उपन्यास ‘रागदरबारी’ का पात्र । मारे गए गुलफाममाथि भने यसअघि नै फिल्म बनिसकेको छ । सन् १९५७ मै कवि/गीतकार शैलेन्द्रले यो कथामाथि ‘तिसरी कसम’ नाम फिल्म निर्माण गरेका थिए । वासु भट्टाचार्यले निर्देशन गरेको यो फिल्ममा राजकपुरले हिरामनको भूमिकामा अभिनय गरेका थिए भने वहिदा रहमानले हिराबाईको ।
–एजेन्सी प्रकाशित : कार्तिक २, २०७६ १०:४०
कार्तिक २, २०७६ आरके अदीप्त गिरी
नेपालको एक मात्र बाह्रसिंगा भूमि— शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज । सुन्दर सुदूरपश्चिमको दक्षिण–पश्चिमी कुनामा अवस्थित । शुक्लाफाँटाको विशाल छातीमा चरिरहेका बाह्रसिंगाको दृश्य पर्यटकहरूका लागि अविस्मरणीय त छ नै, उत्तिकै सुन्दर पनि । उसो त यहाँ बाह्रसिंगा मात्रै छैनन् । दुर्लभ पाटेबाघ, गैंडा, हात्ती, कृष्णसार, सालक, नीलगाई, चितुवा, चित्तल, लगुना, रतुवा, बँदेल आदि थुप्रै संरक्षित जीव छन् । यी विविधामय जैविकी र प्रकृतिले गर्दा यहाँ आउने पर्यटकले एकसाथ अनेक आनन्दानुभूति सँगाल्न सक्छन् ।
त्यस्तै शुक्लाफाँटाको विशाल जंगलले अनेकन किसिमका चराचुरुंगीलाई समेत आश्रय दिएको छ । यसको कञ्चन आकाशमाथि आफ्ना बहुरंगी पखेटाहरू फैलाएर कावा खाइरहेका ती चराहरूको दृश्य अझ आनन्ददायी हुन्छ । हर्ष र उमंगले त्यसै पुलकित भइदिन्छ मन ।घना जंगलबीच आँगनजस्तो यस ठाउँमा कतैबाट अचानक देखापर्छ दुर्लभ पाटेबाघ । तब अघिसम्म निर्धक्क रमाइरहेको मनमा हल्का डर पनि पस्छ । गैंडाहरूको मस्तीले फेरि मन हर्न थाल्छ । हात्तीहरूको लम्काइले हाम्रो आफ्नै जीवनको पदचाप सम्झना हुन्छ । यी यावत् दृश्य–संयोजनले लाग्छ, शुक्लाफाँटा विचित्र छ । मानौँ कि प्रकृतिको कलाकारिताले सुसज्जित ।
कोसीटप्पुपछिको ‘चरा–हब’ का रूपमा पनि परिचित छ शुक्लाफाँटा । दुर्लभ पन्छी खरमजुर यहाँ देख्न पाइन्छ । मयूर, किंगफिसर, सारस, सिमतित्रा, विश्वमै दुर्लभ मानिएको लेसर भुँडीफोरलगायत करिब ४ सय २४ प्रजातिका पन्छीहरू यहाँ छन् ।
शुक्लाफाँटाको आकार कति हो ? तथ्यांक बोल्छ— ३ सय ५ वर्गकिलोमिटर । सुरुमा (विसं २०२६) ‘शाही सिकार आरक्ष’ को रूपमा स्थापित शुक्लाफाँटालाई पछि (विसं २०३१) ‘वन्यजन्तु आरक्ष’ बनाइयो । लामो समय पर्यटकहरूका लागि यहाँ सहज पहुँच थिएन । विसं २०७३ मा सरकारले यहाँको पर्यापर्यटन विकासका लागि भनेर राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्‍यो । त्यसपछि नै यसको पर्यटकीय विकासमा समेत ध्यान दिन थालिएको हो ।
निकुञ्ज आसपासको २४३.५ वर्ग किमि क्षेत्रलाई विसं २०६१ मा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरियो । त्यसपछि सहभागितामूलक संरक्षण, विकास र आयआर्जनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएका छन् ।शुक्लाफाँटाको बीचोबीचमा छ— हरियो विशाल घाँसैमैदान । उपत्यकाझैं लाग्ने करिब ५५ वर्ग किमि क्षेत्रफलमा फैलिएको हरित घाँसेभूमि यहाँको अर्को आकर्षण हो । जहाँ बाह्रसिंगा निर्धक्क चरिरहेका देखिन्छन् । यही घाँसेभूमि हो उनीहरूको बासस्थान र आहारा क्षेत्र । एसियाकै ठूला घाँसेमैदानमध्ये यसलाई समेत चित्रित गरिएको पाइन्छ । बाह्रसिंगालगायत जैविक विविधता र वन सम्पदाको अध्ययन गर्न चाहनेहरूका लागि यो निकुञ्ज एउटा खुला विश्वविद्यालय हो ।
शुक्लाफाँटाको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता छ— सिमसारको । यसभित्र थुप्रै सिमसार क्षेत्र छन् । सिमसार गैंडाको प्रमुख बासस्थान मानिन्छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट स्थानान्तरण गरिएका गैंडाहरूले सिमसार क्षेत्र पाएरै यहाँ सहज जीवन बिताइरहेका छन् । डेढ दर्जन हाराहारी रहेका गैँडाको संख्या पनि बर्सेनि बढ्दो छ ।सन् २०१४ को वन्यजन्तु गणनाअनुसार यहाँ २३ सयको संख्यामा बाह्रसिंगा छन् । अहिले अनुमान गर्दा पनि त्यो झुन्ड सयौँको संख्यामा वृद्धि भएको हुन सक्छ ।भारतीय वन्यजन्तु आरक्षण ‘लग्गाभग्गा’ सँगै पाखुरी जोडेसरी जोडिएको छ यो । सीमाले निकुञ्ज छेक्न नसक्ने रहेछ । त्यसैले पनि शुक्लाफाँटा दुईदेशीय ‘जंगल हब’ बनेको छ । जनावरहरूलाई सिमानाले असर गर्दै गर्दैन । तिनीहरू बिनाबाधा सीमा वारपार गर्छन् ।
तर, बाह्रसिंगा भने भारतीय जंगलमा पाइँदैन । शुक्लाफाँटामा रहेको घाँसे मैदान नै उनीहरूको चरिचरन एवं बासस्थान भएकाले यसै वरिपरि रम्ने गर्छ । पहिलेपहिले भारतीय जंगलमा धेरैजसो बास बस्न रुचाउने हात्तीहरूको झुन्ड पनि अहिले यहाँको सहजताका कारण शुक्लाफाँटामै रमाउन थालेका छन् ।
शुक्लाफाँटाको मुख्य विशेषता बाह्रसिंगाका आफ्नै केही गजब विशेषता छन् । यसले समय–ऋतुअनुसार आफ्नो शरीरको रङ परिवर्तन गर्छ । प्रत्येक दुई वर्षको अन्तरालमा आफ्ना सिङहरू फेर्ने गर्छ । यो रहस्यमय विशेषता वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानको विषय हो ।
बाह्रसिंगा सिङ भएको ‘स्पोटेड डियर’ हो भन्ने धेरैको बुझाइ हुन सक्छ । तर, बाह्रसिंगा विश्वमै दुर्लभ मानिएको फरक प्रजातिको जनावर हो । यसबारे गलत बुझाइलाई चिर्न मात्र सक्ने हो भने पनि शुक्लाफाँटालाई बाह्रसिंगाको हबका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउन सकिन्छ ।
कसरी अवलोकन गर्ने ? मचानमा बसेर मज्जाले अवलोकन गर्न सकिन्छ । शुक्लाफाँटाको छातीमा रमाइरहेका ती चुरुंगी र जनावरलाई सहजै अवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था निकुञ्जले नै मिलाइदिएको त्यहाँ भेटिएका आरक्षण अधिकृत लक्ष्मण पौडेलले बताए । अग्लो मचानमा चढेर आँखाले भ्याएसम्म वन्य जीवनको अवलोकन गर्दै रमाउन पाइन्छ ।
सफारी सोखिनहरूका लागि पनि यो उपयुक्त गन्तव्य हो । नेपालकै सर्वाधिक लामो ‘जंगल जिप सफारी’ यहाँको अर्को विशेषता हो । हात्ती सफारीको पनि यहाँ राम्रो व्यवस्था छ । यी दुवैको प्रयोग गर्न नचाहनेले भरपर्दो गाइड लिएर ‘जंगल वाक’ मा निस्कन पनि सक्छन् । आफ्नै निजी सवारी प्रयोग गर्न चाहनेले पनि निकुञ्जका निश्चित सर्त स्विकारेर प्रवेश गर्न सक्छन् । माघदेखि चैत, वैशाख–जेठलगायतका महिनाहरू यहाँ भ्रमणका लागि उपयुक्त मानिन्छ ।
प्रकाशित : कार्तिक २, २०७६ १०:३९